Nagu saabsan - Xinjia Nylon Co., Ltd.
Huai'an Xinjia Nylon Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1999. Kahor sanadkii 2009, waxay ahayd Warshada caaga ee Huai'an Xinjia. Waxaa loo beddelay magaceeda hadda ee Febraayo 2009. Shirkaddu waxay ku takhasustay soo-saarka, horumarinta, iyo iibinta dunta nayloon, silig burush warshadeed. Nylon 610 wax soo saarka cufan, wuxuu leeyahay nidaam maarayn tayo leh oo dhameystiran oo cilmiyaysan.
Ka dib in ka badan 20 sano oo horumar iyo hal-abuur ah, Xinjia Nylon Co., Ltd. waxay noqotay warshad caan ah oo lagu farsameeyo dunta nayloon ee Gobolka Jiangsu. Daacadnimadeena, awooddeena iyo tayada wax soo saarkeena waxaa aqoonsaday warshadaha. Asxaabta ka socota dhammaan qaybaha bulshada ayaa lagu soo dhaweynayaa inay soo booqdaan, hagaan oo ay gorgortamaan ganacsiga.
Huaian Xinjia Nylon Co., Ltd. waxay ku fadhidaa aag dhan 38 hektar waxayna sameysay saldhig waxsoosaarka dunta nylon oo leh wax soo saar sanadle ah oo gaaraya 4,100 tan, oo leh aag dhisme ah 23,600 mitir murabac ah iyo wadar maalgashi dhan 150 milyan yuan. Shirkaddu hadda waxay leedahay 150 shaqaale ah, oo 15 ka mid ahi ay ku hawlan yihiin cilmi-baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda, waxayna leedahay awood wax-soo-saar cilmi-baaris iyo horumarineed. Haatan waxaa jira 6 khadad wax soo saar.
Waxaan ku hawlan nahay naylon 610 naylon; PBT; silig fiiqan; pp silig looxa; silig fiiqan; tolida caafimaadka Waxaa loo isticmaali karaa wax soo saarka mashiinada, baabuurta, duulista, dhismaha maraakiibta, warshadaha kiimikada. Gaar ahaan, waxay sameyn kartaa saa'idka, suufka, qalabka wax lagu xiro, qaybaha mashiinnada dharka, hagaha qalabka, hoggaamiyeyaasha, bristles, burush, burushka cadayga, wigyada, iwm .Waxaana u habeyn kara alaabooyinka iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, cabirka midabka
Aqoon-isweydaarsigeennu wuxuu ka kooban yahay aag 10,100 mitir murabac ah wuxuuna leeyahay shaqaale 120 ah, oo ay ku jiraan 15 qof oo ku hawlan cilmi-baarista farsamada iyo horumarinta, wuxuuna leeyahay awoodo horumarineed oo wax soo saar xoog leh. Shirkaddu waxay muhiimad weyn siineysaa horumarinta wax soo saarka iyo teknoolojiyada cusub, waxayna muhiimad weyn siineysaa maalgashiga cilmi baarista sayniska. Waxay codsatay 9 ikhtiraac iyo nashqad nooca korantada. Hadda waxaa jira 6 khadadka wax soo saarka, waxaana jira dhowr mashiinno mataano ah, mashiinno wax lagu duubo, cirbadaha polymerization iyo qalabka baaritaanka la xiriira ee loo isticmaalo cilmi baarista iyo horumarinta, kuwaas oo buuxin kara shuruudaha baaritaanka wax soo saarka iyo tijaabada horumarinta, tijaabada iyo wax soo saarka warshadaha.
Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay hagaajisay istiraatiijiyaddeeda horumarineed. Ugu horreyn, waxay uruurisay ilaha aadanaha iyo dhaqaalaha si loo kordhiyo xawaaraha cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka muhiimka ah; tan labaad, waxay si taxaddar leh u abaabushay soo-saarista alaabooyin is-horumarsan si loo hubiyo tayada wax soo saarka; tan saddexaad, waxay fiiro gaar ah u yeelatay horumarinta suuqa oo ku wajahan suuqa. Horumarka degdegga ah ee shirkadaha. Shirkaddu waxay leedahay koox iibin heer sare ah oo in ka badan 400 isticmaale ka wada isticmaalaan dalka oo dhan. xaddiga xariir ee la isticmaalo waxaa lagu kordhiyaa qiyaastii 10% sanad walba, iyo tolliinka caafimaad sidoo kale waxaa lagu kordhiyaa 5% sanad kasta. Waxay aasaas adag u dhigtay iibinta wax soo saarka.
Tayo sare leh:Shirkaddu waxay u heellan tahay soo saarista alaabooyin is-horumarsan si loo hubiyo tayada wax soo saarka
Waqtiga dirida:Shaqaale khibrad iyo waayo-aragnimo leh, oo damaanad-qaadaya bixinta waqtiga ku habboon
Kala duwanaansho dhammaystiran:Inta badan loo qaybiyey silig caday, silig burush warshadeed, silig naylo, qeexitaanno kala duwan iyo midabbo ayaa loo habeyn karaa. Dhexroor silig caadiga ah waa 0.07M-1.8M, iyo midabada waa cas, jaalle, buluug, cagaar, guduud, cawl, madow, iyo hufan.